Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Atlantic Canada waxay u furan tahay socdaalayaasha Mareykanka ee la tallaalay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Ka dib ku dhawaaqista dib -u -furitaanka xadka Kanada, gobollada Atlantic Canada waxay u furi doonaan si buuxda tallaalka socdaalayaasha Mareykanka laga bilaabo Ogosto 9, 2021.
New Brunswick wuxuu soo dhaweyn doonaa socdaalayaasha Mareykanka ee qaatay taxanaha buuxa ee tallaalka COVID-19 oo ay aqbashay Dowladda Kanada.
Laga bilaabo Ogosto 9, socdaalayaasha Mareykanka ee si buuxda loo tallaalay ayaa loo oggol yahay inay galaan Newfoundland & Labrador.
Laga bilaabo Ogosto 9, booqdayaasha Mareykanka ee u qalma inay yihiin socdaalayaal si buuxda loo tallaalay ayaa looga baahan yahay inay codsadaan gelitaanka Nova Scotia.
Afar gobol oo Atlantic ah Canada wuxuu u furi doonaa socdaalayaasha Mareykanka oo si buuxda loo tallaalay laga bilaabo Ogosto 9, 2021.
Waxay ku taallaa waqooyiga xadka Mareykanka ee Maine, Atlantic Canada waa dad aan xor ahayn, gobolka xeebta oo ka kooban afarta gobol ee Kanada New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & Labrador, iyo Prince Edward Island.
Furitaanka soohdinta badhtamihii Ogosto waxay u oggolaanaysaa socotada Mareykanka inay ku raaxaystaan ​​xilliga xagaaga dabayaaqada ee Atlantic Canada, kaas oo bixiya cimilada qabow, biyaha xeebaha diirran, iyo dalxiiska bannaanka. Xilliga dayrta wuxuu ku faanaa caleemo midab leh iyo dhowr cunto oo heer caalami ah iyo xaflado dhaqameed. Si sahal ah looga heli karo Waqooyi-bari, gobolku wuxuu bixiyaa xeebyo aad u qurux badan, cuntooyinka badda oo cusub, bannaanka bannaan ee bannaan, waayo-aragnimada dhulka iyo biyaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Dhammaan dadka socotada ah waa inay isticmaalaan ImaanshahaCAN (app ama bogga internetka) si ay u soo gudbiyaan macluumaadkooda safarka. Ka sokow u hoggaansanaanta tilmaamaha socdaalka federaalka ee Kanada, gobol kasta oo ku yaal Kanada wuxuu leeyahay xaddidaadyo socdaal iyo shuruudo u gaar ah si looga ilaaliyo dadka deggan COVID-19. Maaddaama hab -maamuusku ku kala duwan yahay gobol kasta, waa kan waxa socdaalayaashu u baahan yihiin inay ka ogaadaan gelitaanka gobol kasta si ay u qorsheeyaan xiisaha soo socda ee Atlantic Canada.
Marka xadka federaalka Kanada la furo Ogosto 9, New Brunswick wuxuu soo dhaweyn doonaa socdaalayaasha Mareykanka ee qaatay taxanaha buuxa ee tallaalka COVID-19 oo ay aqbashay Dowladda Kanada.
Laga bilaabo Ogosto 9, socdaalayaasha Mareykanka ee si buuxda loo tallaalay ayaa loo oggol yahay inay galaan Newfoundland & Labrador waxaana looga baahan yahay inay ku soo gudbiyaan foom safar 72 saacadood gudahood taariikhda safarka la filayo oo ay raacaan tilmaamaha caafimaadka dadweynaha inta ay joogaan. Socotada si buuxda loo tallaalay looma baahna inay gooni isu taagaan ama laga baaro COVID-19 markay yimaadaan gobolka.